Gargaarkii ugu horreeyay oo la gaarsiiyay dadkii ay saameysay fatahaadda wabiga ee G/Sh/dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gargaarkii ugu horreeyay oo la gaarsiiyay dadkii ay saameysay fatahaadda wabiga ee G/Sh/dhexe
MAREEG 28 May 2016 28 May 2016
Gargaarkii ugu horreeyay ayaa maamulka Gobolka Shabelaha dhexe waxa uu gaarsiiyay dadkii uu saameeyay Fataahadda wabiga Shabeelle ka sameeyay Tuulada Bayxoow oo hoostaga degmada Jowhar.
Abdhir Caddow Hiraabe Gudoomiye Ku xigeen Amniga iyo siyaasadda ee degmada Jowhar ayaa tilmaamay in gargaarkan uu muhiim u yahay dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay Fatahaadda wabiga Shabeele ee Tuulada Bayxaaaw.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeleah Dhexe Cali Cabdulaahi Guudlaawe ayaa sheegay in Gargaarkan oo ka yimid Hay’ad islaami ah la gaarsiin doono Dagmadda Mahaday oo sidaas oo kale uu ku fatahaya Wabiga .
“waxaan u mahad celinaya Hay#adda Islamic Relief Inter National oo gargaarkan na soo Gaarsiiyay Waa kii ugu Horeeyay ee la gaarsiiyo dadkii uu saameeyay Fatahaada Wabiga ee Tuulada Bayxaaw kaliyana Maahee Wabigu waxa uu ku fatahay Tuulooyin hoostaga Dagmooyinka Mahaday iyo Balcad” ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe.
Gudoomiyaha Gobolka ayaa intaa ku daray in dadka ay fathaaddu sameeyeen aanay ku filneeyn gargaarka la soo gaarsiiyay .
“Gargaarkan kuma filna dadkan waxa waliba soo dhow Bisha ramadaan Cidkasto oo awooddo waxan ugu baaqayna inay u soo Gurmadaan dadka Fathaaduuhu ay dhibaateeyeen anagana waxaan Ballan qaadaynaa inaan si Cadaalad ah u Gaarsiino wixi Naloo keeno dadka looga tala galay ee dhibaataysan sida dadkan aan ugu qeybinay” sidaasi waxaa yiri gudoomiye Cali Guudlaawe.
Gargaarkan oo hordhaca ah aya sidoo kale waxa lagu wadaa in la gaarsiiyo deegaanno kale oo gobolka Shabeelaha Dhexe ah, waxaana uu ku soo beegmaya xili deegaannada qaar dadkii daganaa ay ka barakaceen markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle.
Ogeysiis Muhiim ah oo ku saabsan xilliga uu dhacayo imtixaanaadka dugsiyada G/Banaadir
Ajaaniib Sharci daro ku joogtay Magaalada Muqdisho oo Maxkamad lasoo taagayo